ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup) มีรายการตรวจอะไรบ้าง? - intouchmedicare
Last updated: 2022-04-01 | 1586 ကြည့်ရှုခြင်း |
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရင်သွေးငယ်ဟူသည်မိဘတို့၏မျက်လုံးဟုပင်နှိုင်းယှဉ်၍ပြောလို့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်တာ၀န်များကြောင့် မိသားစုအချို့သည် မိမိရင်သွေးငယ်အားအမြဲထောက်ပံ့မှု့မပေးနိုင်သည့်အတွက်မိမိအစားကလေးထိန်းသူ (nanny) ဌားရန်လိုအပ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ကလေးထိန်းသူ ၏မူရင်းအကြောင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအကျမ်းမျဉ်းစစ်ဆေးမှု့အားပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ မိမိရွေးချယ်သောသူသည် မိမိရင်သွေးငယ်အားရောဂါကူးစက်စေပါကမကောင်းပါ။ထို့ကြောင့်ကလေးထိန်းလုပ်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် (Nanny Employment Checkup) နှစ်ဉီးနှစ်ဖက်အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှု့ရှိစေရန်စစ်သင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ဤကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့အသေးစိတ်ပရိုဂရမ်အားလာကြည့်ကြပါစို့။
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ (Health checkup) ဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်၏အဘက်ဘက်မှအခြေအနေအားစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။၄င်းသည်းလတ်တလောရောဂါဖြစ်နေခြင်း(သို့)ပြင်းးထန်သောရောဂါ၊ကူးစက်နိုင်သောရောဂါ၊နှာတာရှည်ရောဂါများအပါအ၀င် အခြားအမျိုးမျိုးရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိမရှိကိုသိရန်နှင့်မှန်ကန်စွာကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် မိမိ မိသားစုလူနေမှု့နေထိုင်ရေးနှင့်အလုပ်အားမထိခိုက်စေရန်အတွက်(သို့)လတ်တလော၌ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိပါကအနည်းဆုံး 1 ကြိမ်စစ်ခြင်းဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့မှု့ရစေပါသည်။
ကလေးထိန်းလုပ်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည်(Nanny Employment Checkup)ဆိုသည်မှာကလေးထိန်းအလုပ်တာ၀န်ယူမည့်သူ(nanny)၌ကလေးအားကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါများဖြစ်သောဉပမာ အသက်ရှု့လမ်းကြောင်းမှကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ၊အရေပြားရောဂါ၊ထိတွေ့မှု့ကြောင့်ကူးစက်နိုင်သောအခြားရောဂါများနှင့်မည်သည့်ပိုးများရှိသည်ကိုသိနိုင်ရန်အတွက်ကျန်းမာရေးအကျမ်းမျဉ်းစစ်ဆေးမှု့ဖြစ်ပါသည်။ကလေးထိန်းတာ၀န်ယူလုပ်မည့်သူသည်မိဘ(အဖေအမေ)အစားကလေးနှင့်အမြဲတမ်းအနီးကပ်ထိတွေ့ရမည်သူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်းမှ ကလေးငယ်ထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့သည် ဘာတွေစစ်ဆေးရပါသလဲ ?
Intouch Medicareဆေးခန်းမှ ကလေးငယ်ထိန်း(Nanny Employment Checkup) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ ပရိုဂရမ်နှစ်မျိုးခွဲထားပြင်ီးစစ်ဆေးရမည့်အချက်အမျိုးမျိုးမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါ ၅ မျိုးဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ်/Medical Certificate
အသည်းရောင်ဗိုင်းရပ်စ်အေပိုးစစ်ဆေးခြင်း/ HAV Igm
၀မ်းစစ်ခြင်း/ Stool C/S
ကလေးငယ်ထိန်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ပရိုဂရမ် အားစိတ်၀င်စားသောမိဘများအတွက်ကလေးထိန်းအလုပ် လုပ်မည့်သူအား အိမ်အနီးနားရှိIntouch Medicareဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းသို့ ခေါ်လာ၍စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။မိမိနှင့်နီးသောဆေးခန်းဌာနခွဲအား Google တွင်ရှာခြင်းဖြင့် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏(Website)၀က်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်းများမှလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။